Homeसमाचारविश्वको अनौठो रुख ! जहाँ पैसा फल्छ, थाहा पा’उनुहोस् कहिल्यै नदेखेको र नसुनेको यो रुखको रोचक रह’स्य
May 22, 2021 admin समाचार 4587
पैसा फल्ने रुख तपाईले कहि’ल्यै देख्नुभएको छ ? पैसा रुखमा फल्दैन भन्ने कुराको अप’वादको रुपमा रहेको रुख बेलाय’तको पीक जिल्लामा रहेको छ । १७०० वर्ष पुरानो हो र यो रुखभरी हजारौंको संख्यामा सिक्का गाडि’एका छन् ।
खास कुरा त के भने यहाँ बेला’यती मात्रै होइन संसारका हरेक देशका सिक्का जो’डिएका कारण यो रुख बहुमूल्य बन्दै गइरहेको छ । यो रुखमा सिक्का लगाउँदा सुख शान्ति आउने र मनोका’मना पूरा हुने विश्वासका साथ दिनानुदिन सिक्का खो’प्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
वेल्स राज्यको पोर्टमो’रियन गाउँमा भएको यो रुख चर्चित पर्यटकीय स्थल बनिसकेको छ जहाँ यो रुख’लाई हेर्नकै लागी भनेर दैनिक कैयौँ पर्यट’क जाने गर्दछन् ।
काठमाडौ । विश्वको सबै भन्दा महँगो कार बु’गाटी भन्ने कार कम्पनिले निर्मा’ण गरेको छ । यस बर्षको जेनेवा अटो शोमा यसलाई सबै भन्दा महँगो कार घोष’णा गरिएको हो । बुगाटी कम्पनिले बनाएको नयाँ मोडलको गाडीको नाम बुगाटी ला वुएरेट नोयरू रा’खेका छन् । सो कारलाई बु’गाटीले बनाएको पुरानो मोडल चिरोनको रुपा’न्तरित मोडल भनिएको छ ।
यो भन्दा पहिले रोल्स रो’यसको स्वीप्टेल भन्ने कारलाई विश्वको सबै भन्दा म’हँगो कारको उपाधि दिएको थियो भने यो वर्ष बुगाटी कम्पनिले उक्त उपाधि हात पारेको छ । बुगाटी कम्प’निले आफ्नो ११० औँ वर्ष गाठको उपलक्ष्यमा सार्वज’निक गरेको हो ।
निकै राम्रो मो’डलहरु बनाउने यो कम्प”नीको मोडल भने फ्रान्समा निर्माण गरिन्छ । कम्पनिले कारको मूल्य १९ मिलियन डलर तोकेको छ । यो मुल्य विश्व’कै सबै भन्दा महँगो मुल्य रहेको जनाइएको छ । यो कारलाई किन्ने व्यक्ति अझै सार्व’जनिक भएका छैनन् । ओएस नेपालबाट
April 11, 2021 admin समाचार 4564
साताको पहिलो दिन अर्थात आइ’तबार सबेका लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । साताकै पहिलो दिन भएकाले मानिसहरुले आफ्नो नयाँ योजना अनुसार यो दिनलाई सदुपयोग गर्ने योजना बुनि’रहेका हुन्छन् भने यो दिन खासमा भगवान् सूर्य देव’ताको दिनका रुपमा
September 19, 2020 admin अन्तर्राष्ट्रिय, समाचार 12789
December 4, 2020 admin समाचार 7104